Wondershare IPhone Transfer: Transfer music, videos, sawiro
Wondershare Transfer iPhone waa qalab weyn oo waxtar leh si aad u hagaagsan aad content iPhone kombiyuutaro aad . Sidaa daraadeed, aad dhoofin karo heeso aad iPhone, videos, sawiro qabtay, playlists, buugaag maqal ah, iyo in ka badan kombiyuutaro aad maskax ahaan. Waa is barbar doonaa music ee iPhone iyo Lugood Library, nuqul oo kaliya Lugood u baahnaydeen files si aad Lugood Library. Iyo waxa la isticmaalayo, aad awoodaan in ay soo dhoofsadaan songs, videos, sawiro, iyo playlists, ka your computer si aad iPhone aan syncing aad Lugood Library. Waa mid ka mid ah music iPhone kala iibsiga qalab ugu fiican. Wondershare software iPhoneTransfer hadda taageertaa dambayn macruufka 8 buuxda. Waxay ka dhigaysa mid loo dhoofiyo iyo dhoofinta files dhaxeeya iPhone iyo kombuyuutarrada si fudud oo fudud. Halkan waxa kale oo waa hage ah si ay u sameeyaan xogta iPhone aad ugu nabad badan, taas oo u baahan 3 tallaabo wareejiyo. iyaga Fiiri .
Wondershare Transfer iPhone
Files Import kombiyuutar kasta si iPhone kasta oo aan isagoo tirtira iPhone;
Copy files ka computer ah in aad iPhone;
Music kaabta ka iPhone kombiyuutaro la ratings, farshaxanka, iyo play soo oogay.
Nidaameed iPhone music in Lugood Library muuqan;
Samaynta, Iyo La albums edit sawir si ay u maareeyaan images on iPhone;
Dhoofinta playlists smart ka iPhone in Lugood Library iyo kombiyuutarada;
Kaabta iPhone qabsatay sawiro iyo videos kombiyuutaro;
Si buuxda u taageeraan macruufka dambeeyay 9/8 iyo aaladaha Apple badan;
Kale Transfer 9 iPhone
App A fudud weli wax ku ool u ah ujeedada kala iibsiga ee files ka meel kale. Waxa kale oo ay gacanta ku hayso qalabka macruufka inta badan ka sahlan oo qaab ka fiican tahay Lugood. Syncios waa hab lagu kala iibsiga fudud iyo ururka ee iphone, ipod iyo xogta ipad on pc kasta.
Wax soo saarka ka mid ah CopyTrans, CopyTrans Apps waa xal fudud in effortlessly adeegi adeegyo dhawr ah sida kor taageero iyo soo celinta iPhone barnaamijyadooda, goobaha iyo waraaqaha. Iyadoo isticmaalka CopyTrans Apps aad xitaa ku dari kartaa waraaqaha in ay barnaamijyadooda iyo wareejiyo kulan iPhone la dhibcaha iyo horumarka in qalab kasta. Highlight ee CopyTrans Apps waa in hawsha si buuxda Rakibaadda ee Chine macruufka ee iPhone iyo iPad la CopyTrans Apps qaadataa qasabno kaliya labo iyo xitaa uma baahna Lugood.
Adeegyada dhowr ah oo CopyTrans Apps noqon karaa sida soo socota:
Rakibaadda barnaamijyadooda ku iPhone kasta
Rakibaadda ee Chine on iPhone kasta waa shaqo fudud in la sameeyo CopyTrans Apps. Waa sida jiita fudud iyo shaqada dhibic. Xitaa takhalusid kasta barnaamijyadooda in hal ama weyn waa in tirada fudud oo degdeg u qaban la CopyTrans Apps ah.
Waxaa loo tixgeliyaa sida mid ka mid ah ugu dambaysta ah oo dhan ka mid ah nidaamka maamulka content macruufka in siinayaa gacanta weyn ka badan alaabtayda oo dhan. Xataa, waxaa loo tixgeliyaa in AnyTrans ku daryeela Music iyo Playlists ka sii badan Lugood falaa.
iExplorer Connect waa uun app kale ujeedada tahay Windows iyo Mac. Waxa ugu fiican ee ku saabsan app tani waa in ay u baahan tahay aqoon u lahayn farsamo si ay u isticmaalaan. Waxaa sii qulquli warbaahinta la is-dhexgalka iyo daruur iyo sidoo kale ogolaanee in la helo ee buugga wax daaqadaha ama Mac.
Phone Trans, kaliya app kale ujeedada music kala iibsiga ku haboon iPhone oo lacag la'aan ah! Waxaa loo tixgeliyaa sida music iPhone kala iibsiga ugu fiican, app waa mid ka mid ah ugu fudud ee ay u isticmaalaan oo dhab ahaantii waa la tixgelin karaa sida ku dul socda oo keliya ee aad Ingariiska. Phone Trans waa heer sare ah oo waxtar leh ujeeddo ah wareejinta music, sawiro, barnaamijyadooda, filimada, videos music, bandhigyada TV, podcasts, ringtones, eBooks for Free!
Iyadoo PhoneTrans laga heli karo labada dhufto ee Windows iyo Mac, app waa app a gebi ahaanba bilaash ah oo si fiican loo dhisay iPhone music kala iibsiga. Wuxu u adeegaa ujeedada 100% Transfer Free Media Faylal ay si / ka PC iyo Mac sida Dhoofinta music ka iPhone, iPad iyo iPod in computer, iyo qeybsanaan xitaa aan u baahan ee Lugood. Waxa kale oo ay u adeegtaa ujeedada kala iibsiga ee filimada, ringtones, dhowr files warbaahinta iyo barnaamijyadooda ka iyo qalab. Iyadoo loo tixgeliyo mid ka mid xal stop ee dhammaan baahida PhoneTrans, Phonetrans waxaa loo arkaa sida ugu wanaagsan ee suuqa kala iibsiga music iPhone iyo ujeedooyin kale.
App An loo arkaa a brainer lahayn, ujeeddo ah ku wareejinta faylasha ka idevices in Lugood iyo pc. iSkysoft TunesOver daboolayaa dhinacyo kala duwan sida Copy Music, Videos iyo Playlists in Lugood iyo PC ka iDevice, Music la ururiyey oo aan u baahan ee itune wadaag. Ka PC / Lugood Bedelka Media Faylal ay si iDevice iyo Tayadoodii qaabab iyo Yeelo Your Media faylasha iyo abuuraan nusqado oo iyaga ka mid ah oo ku saabsan PC / Lugood yihiin qaar ka mid ah shaqooyinka kale, taas oo iSkysoft TunesOver daboolaa.
Zapya waa uun qalab kale oo loogu talagalay cross-madal file kala iibsiga & qaybsiga degdeg ah. Waxaa loo arkaa mid ka mid ah la wadaago qalabka coolest adduunka oo dhan. Zapya waa Free iyo Is-jira Sharing Network. Waxa ugu fiican ee ku saabsan Zapya waa awood u leh inay u gudbiyaan files aan Mobile Data Network xiriir wifi midna. Isticmaalka xogta No! Internet No loo baahan yahay!
Fotolr, app awood iska leh sifayn ee processing sawir App taas oo uu leeyahay shaqooyin badan oo awood leh iyo mid waxtar leh. Shanta hawlaha waaweyn ee Fotolr waa Picture tafatirka, Saamaynta Image, tiriyo, function Album iyo qaybsiga sawir.
Transfer Simple (APP)
Transfer Simple waa kaliya mid ka mid kale oo ka mid ah ugu wanaagsan ee iPad iyo iPhone sawirka app kala iibsiga, taasoo si weyn loo jecel yahay dadka adduunka oo dhan ka mid ah. Ay caanka ah ee Chine la xaqiiqada ah xukumi karaa Transfer fudud App ayaa lagala soo bixi badan hal milyan oo jeer. Iyada oo Transfer ee Simple waxa uu noqonayaa mid aad u fudud in aad nuqulka sawiro ka iPad iyo iPhone si aad u computer. Waxaa sidoo kale wuxuu dhawraa-Meta xogta sawirrada. Iyada oo Transfer ee Simple oo dhan sawirada iyo videos on computer ayaa loo gudbin karaa si aad u iPad iyo iPhone via Wi-Fi. Waxa kale oo ay bixisaa hab difaac oo sidaas aad samayn kartaa code baas inay helaan. Highlight ee app waa in ay ku soo rogtay ma xadka sawirka wareejiyo le'eg, oo sidaas waa inaad awood buuxda si farsamo iibsiga leeyihiin. Waxa kale oo ka shaqeeya dhammaan hababka ka hawlgala oo ay ku jiraan daaqadaha iyo Linux. Si kastaba ha ahaatee, waayo hore 50 photos, app waa lacag la'aan, laakiin waxay u baahan tahay xaddiga dheeraad ah in la siiyo waxaa ka shisheeya.
Daawo Video ee Wondershare Transfer iPhone
Top 10 bedelan karo Best in Lugood
Playlists Dhoofinta ka iPhone in Lugood
Ka Lugood Bedelka Music inay iPhone
Xiriirada kala iibsiga ka iPhone in Gmail
Import Gmail Xiriirada inay iPhone
Bedelka Playlists ka iPhone in Lugood
Ka iPhone Bedelka Content si Mac
Waa Maxay iPhone Best ka Apps
Faraqa u dhexeeya Android oo iPhone
> Resource > iPhone > Wondershare iPhone Transfer: Best iPhone Kaaliyaha